लौ,के -भयो आखिर श्वेता खड्कालाई ? ठुलो धोका भएको भन्दै लेखिन् यस्तो भावुक स्टाटस, खोलीन् र भित्री कुरा… – News Nepali Dainik
लौ,के -भयो आखिर श्वेता खड्कालाई ? ठुलो धोका भएको भन्दै लेखिन् यस्तो भावुक स्टाटस, खोलीन् र भित्री कुरा…
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २०, २०७७ समय: १८:५५:३५
नायिका स्वेता खड्का सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सकृय छन् । उनले सिन्धुपाल्चोकमा माझी समुदायका लागि सामुहिक बस्ती निर्माण गरिरहेकी छन् । तर सो वस्ती निर्माणको काम अझै सकिएको छैन ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै आफुलाई माझी बस्ती बनाउन आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर आश्वासन दिएकाहरुले धोका दिएको बताएकी छन् ।
नायिका स्वेता खड्काले सन् २०७४ मै सिन्धुपाल्चोकमा एकीकृत माझी बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसका लागि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभियान चलाइन् । देश विदेश गएर आर्थिक संकलनको काम गरिन् ।
केही दाताहरुले उनलाई सहयोग गर्ने बाचा गरे । तर त्यसरी बाचा गरेकाहरुले धोका दिएका कारण आफ्नो अभियान सफल हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
स्वेता श्री फाउण्डेसनको तर्फबाट माझी बस्ती बनाउने घोषणा भएको थियो। तर हालसम्म पनि उक्त माझी बस्तीको निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
तर केहि यस्ता दाताहरु पनि भेटिए जस्ले सहयोग रकम बोल्नु भयो तर सहयोग उपलब्ध गराउनु भएन । हामिले कुनै जोर जबर्जस्ती नगरिकनै आफ्नै मनले, स्वस्तस्फुर्त रुपमा कबुल गर्नु भएको सहयोग प्रदान गर्नलाई आनाकानी गर्नेहरुको लिष्ट लामै छ । खैर , दान ९धर्म र कर्म भनेको मनदेखी स्फुटन हुने कुरा हो । हामिले त सहयोगको अपिलसम्म गर्ने हो ,बलजफती गर्ने होईन ।
तथापी , आफ्नो प्रतिवद्दता र कटिवद्दतालाई भुलेर गरिवहरुको आशा र भरोशा माथी खेलवाड गर्नु भने पक्कै राम्रो होईन । पुरा गर्न नसक्ने९बाचा, पुर्ती गर्न नसक्ने ९आस्वासन र दिन नसक्ने ९सहयोगको कुनै अर्थ छैन । अत स् आफुलाई समाज सेवी को रुपमा चिनाउन कोही कसैको भरोशा माथी खेलवाड नगरौ ।
Last Updated on: February 2nd, 2021 at 6:55 pm